Ogaden News Agency (ONA) – Xadgudubka xuquuqda aadanaha ay iska kaashanayaan Gumaysiga Itobiya iyo maamulka Waqooyiga Somaliya (Somaliland)
Xadgudubka xuquuqda aadanaha ay iska kaashanayaan Gumaysiga Itobiya iyo maamulka Waqooyiga Somaliya (Somaliland)
Posted by ONA Admin	/ May 26, 2013
Waxaa bishan 20keedii 2013 ay afduubeen maamulka ka dhisan waqooyiga Somaliya ee SomaliLand Cabdiraxmaan Xassan Cabdulaahi oo ah muwaadin Ogadenya u dhashay oo maritaan ku ahaa madaarka Berbera isagoo u sii jeeda xeryaga qaxootiga dalkaYemen oo eheladiisa ay ku jiraan. Muwaadinkaa intay hayeen maamulka Hargaysa waxaa loo gaystay jidhdil iyo maraamar ay fulinayeen kooxda qabiilka isu bahaystay ee maamula Waqooyiga Somaliya, iyagoo ugu dambayntii u dhiibay sirdoonka gumaysiga Itobiya ee halkaa jooga, kuwaaso ula kacay meel aan la ogayn ilaa hadda.
Ilaa bishan aynu ku jirno ee May waxay ku wadeen maamulka Hargaysa ugaadhsi shacabka S.Ogadenya ee booqashada ku imanaya dalkaa. Arintaa oo keentay in 27 muwaadin, oo qaarkood ay ahaayeen xataa Liyu Police (Hawaarin) fasax ku joogay ay qab-qabtaan una dhiibaan sirdoonka Itobiya. Intii Hawaarinta ahayd waa la soo daayay ugu dambayntii, hasa ahaatee dadkii shacabka ahaa ee lala tagay iyagoo aad loo jidh dilay ayaan la ogayn ilaa hadda meel ay jiraan.
Xadgudubkan qaawan ee ka dhanka Mabaadiida Asaasiga ah ee Xuquuqda Aadanaha waxay uga danleeyihiin maamulka Hargaysa inay kaga helaan taageero gumaysiga Itobiya. Intii lagu dhawaaqay gooni u goosadka Waqooyiga Somaliya, dad shacab ah oo ka badan 300 ayay maamulka Hargaysa u dhiibeen sirdoonka Itobiya.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay uga digaysaa maamulka Hargaysa inay kaligood xambaaran doonaan wixii ka yimaada falal dambiyeedkaa ay kula kacayaan shacabka S.Ogadenya. Waxayna xasuusinayaan in shacabka Somaliyeed uu ku noolyahay labada dhan ee xadka u dhexeeya, arimaha noocan ahna ay ka dhalanayso inuu sii xumaado xidhiidhka ka dhexeeya labada shacab taasoo aan dan u ahayn labada shacab ee dagaalada sokeeye ay dhibaateeyeen.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay ugu baaqaysaa Beesha Caalamka iyo haya’adaha Xuquuqda Aadanaha inay cambaareeyaan ka ganacsiga dadka shacabka ah ee labada maamula ee Hargaysa iyo Adisababa ay bilaabeen oo talaabo laga qaado sidii looga hortagi lahaa Dagaal-oogayaasha ka ganacsanaya shacabka S.Ogadenya ee u gacan galinayo Itobiya say ugu helaan taageero dagaalada qabaliga ah ee ka oogan Somnaliya.